राज्य को महिला प्रमुख | एशियामा पावरमा आधुनिक महिला
एशिया मा राज्य को महिला प्रमुख
by कोली स्ज्जेपेन्की
यस सूची मा महिलाहरूले 1960 मा पहिलो पटक प्रधान मंत्री बनेको श्रीलंकाको सिरिमोवो बन्दारानाइकको साथ शुरु हुने एशियामा सबै देशहरुमा उच्च राजनीतिक शक्ति पाएको छ।
आजसम्म, दर्जन भन्दा बढी महिलाहरूले आधुनिक एशियामा सरकारहरूलाई नेतृत्व गरेका छन्, जसमा धेरैले प्रायः मुस्लिम राष्ट्रहरूलाई शासन गरेका छन्। तिनीहरू यहाँ पहिलो पटक कार्यालयमा सुरू हुने मितिको सूचीमा सूचीबद्ध छन्।
सिरिमावो बानारानाइक, श्रीलंका
श्रीलंकाको सरिमवो बन्दारानाइक (1916-2000) आधुनिक राज्यमा सरकारको प्रमुख बन्ने पहिलो महिला थियो। उनले सीलोनका पूर्व प्रधानमन्त्री, सुलेमान बार्नायककी विधवाको विधवा थिए, जसले 1 995मा बौद्ध भिक्षुले हत्या गरेको थियो। श्रीमती बाडनानेइकले तीन नियमहरूलाई सीलोन र श्रीलंकाको प्रधान मंत्रीको रूपमा चार दशैंको अवधिमा 1960-65, 1970- 77, र 1994-2000।
एशियाका राजनीतिक राजवंशहरूको धेरैजसो, नेतृत्वको बन्दारानाकेई परिवारको परम्परा अर्को पीडामा जारी रह्यो। श्रीलंका अध्यक्ष चन्द्रिका कुमारत्सुना, तल सूचीबद्ध गरिएको, सरिमोवो र सुलेमान बाँडनायकको सबैभन्दा ठूलो छोरी हो।
इंदिरा गांधी, भारत
केन्द्रीय प्रेस / हल्टन अभिलेख Getty Images मार्फत
इंदिरा गांधी (1917-19 1984) तेस्रो प्रधानमन्त्री र भारतको पहिलो महिला नेता थिए। उनको पिता, जवाहरलाल नेहरू , देशको पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो; उनको धेरै सोसाइटी महिला राजनैतिक नेताहरु जस्तै, उनले नेतृत्व को पारिवारिक परंपरा जारी राखे।
श्रीमती गांधीले 1966 देखि 1977 सम्मको प्रधान सेवाको रूपमा सेवा गरे, र 1 99 1 पछि 1984 मा उनको मृत्यु भएको थियो। उनी 67 वर्षको उमेरमा हुँदा उनी आफ्नै आफन्तका द्वारा हत्या गरेका थिए।
इंदिरा गांधीको पूर्ण जीवनी पढ्नुहोस्। बढि »
गोल्डे मेयर, इजराइल
डेभिड ह्यूम केनेरी / गेट छविहरू
यूक्रेनी जन्मे गोल्डो मीयर (संयुक्त राज्य अमेरिकामा 1977-1978), न्यूयॉर्क शहर र मिलवाकी, विस्कॉन्सिनमा रहन संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुनुभयो, त्यसपछि 1921 मा फिलीस्तीनको ब्रिटिश जनादेश र एक किबिबजमा सामेल हुनुभयो। उनी इस्राएलको चौथो प्रधान बने। 1 996मा मंत्री, 1974 मा यम किप्पु युद्धको निष्कर्ष सम्म सेवा गर्दै।
गोल्डे मेयर को इजरायली राजनीति को "आयरन लेडी" भनिन्छ र यो पोस्ट मा एक पिता या पति को बिना उच्चतम कार्यालय सम्म पुग्न पहिलो महिला राजनीतिज्ञ थियो। मानसिक रूपमा अस्थिर व्यक्तिले 1959मा क्यासिनेट (संसद) कक्षहरूमा एउटा ग्रेनाड फेंक्यो जब तिनी घाइते भए र लिम्फोमा पनि छोडे।
प्रधान मंत्री गोल्डे मेयरले जर्मनीको म्यूनिखमा 1972 को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा ग्यारह इजरायली एथलीटहरूको हत्या गर्ने ब्ल्याक सेप्टेम्बर आन्दोलनको सदुपयोग गर्न र मारिएका थिए।
Corazon Aquino, फिलिपिन्स
Corazon Aquino, फिलीपींस को पूर्व राष्ट्रपति। एलेक्स बोबी / गेट छवियाँ
एशियामा पहिलो महिला राष्ट्रपति "साधारण गृहिणी" थियो फिलिपिन्सको कोर्जोन एक्कुनो (1933 -2013), जो कि हत्याको सीनेटर बेनिगाइन "विनोद" एक्विनो, विधवा विधवा थिए।
Aquino "जनशक्ति पावर क्रांति" को नेता को रूप मा अग्रिम गर्न को लागी आए जुन 1 99 8 मा सत्ताधारी देखि तानाशाही फर्डिनान्ड मार्को मजबूर भएको थियो। मार्कोस को नोनिओ एक्विनो को हत्या को आदेश दिए।
कोरुजोन एक्किनो 1984 देखि 1984 सम्म फिलीपिन्सको ग्यारहवें राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गर्थे। उनको छोरा, बेनिन्गो "नय-नओ" एक्कुनो तेस्रोले पनि पन्ध्रवर्षीय राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गर्नेछन्। बढि »
बरु भट्टराई, पाकिस्तान
बेपत्ता बिहार, पाकिस्तानको पूर्व प्रधानमन्त्री, 2007 को उनको हत्या भन्दा धेरै समय अघि। जॉन मूर / गेट छवियाँ
पाकिस्तान को बंगलादेश (1954 -2007) बिरुद्ध एक अन्य शक्तिशाली राजनीतिक वंश का सदस्य था; उनको पिता जनरल 1919को सामान्य मुहम्मद जिया-उल-हक को मृत्युपछि उनको देश र राष्ट्रपति दुवैको रूपमा सेवा गरे। जियाको सरकारको राजनैतिक कैदीको रूपमा, सन् 1988 मा मुस्लिम राष्ट्रको पहिलो महिला नेता बन्न जाने बानी बन्नेछ।
उनले 1988 देखि 1 993सम्म र 1 999 देखि 1 999 सम्म पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको रूपमा दुई सर्तहरू सेवा गरे। सन् 1 997मा बंगलादेशमा तेस्रो पदको लागि प्रचार गरिरहेको थियो जब उनी हत्या भएको थियो।
यहाँ बरु बंगलादेशको पूर्ण जीवनी पढ्नुहोस्। बढि »
चन्द्रिका कुमारनता, श्रीलंका
अमेरिकी राज्य विभाग विकिपीडिया मार्फत
सरिमोवो बन्दारानाइक (माथि उल्लेख गरिएको) सहित दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीका छोरीको रूपमा, श्रीलंका चन्द्रिका कुमारनात्न (1945-वर्तमान) राजनीतिमा प्रारम्भिक उमेरबाट राजनीतिमा उभिएका थिए। चन्द्र्रको मात्र चौदह थियो जब तिनको बुबाको हत्या भयो; उनको आमा त्यसपछि पार्टी नेतृत्वमा लागे, संसारको पहिलो महिला प्रधान मंत्री बन्यो।
1988 मा, एक मार्क्सवादी हत्या चन्द्रिका कुमारनगर को पति विजय, एक लोकप्रिय फिलिम अभिनेता र राजनीतिज्ञ। विधवा चन्द्रिकाले केही समयका लागि श्रीलंकालाई छोडे, युनाइटेड युनिभर्सिटी अफ संयुक्त राष्ट्रका लागि काम गर्दै, तर 1 99 1 मा फर्केर आए। उनले सन् 1986 देखि 2005 सम्म श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गरे र जातीय बीचको लामो-चलिरहेको श्रीलंका नागरिक युद्धको अन्तमा सहायक साबित भयो। सिन्हाली र तमिल ।
शेख हसिना, बांग्लादेश
यस सूचीमा अन्य धेरै नेताहरूको रूपमा, बांग्लादेशका शेख हसिना (1947-उपस्थित) पूर्व राष्ट्रिय नेताको छोरी हो। उनको बुबा, शेख मुनिबुर रहमान, बांग्लादेशको पहिलो राष्ट्रपति थिए, जुन 1971 मा पाकिस्तानबाट भागे।
शेख हसिनाले प्रधान सेवाको रूपमा दुई सर्तहरू सेवा गरे, 1996 देखि 2001 सम्म, र 2009देखि वर्तमान सम्म। बरु हजुरबुबा जस्तै शेख हनीना भ्रष्टाचार र हत्या सहित अपराधको आरोप लगाईयो, तर उनको राजनीतिक कट्टर र प्रतिष्ठा हासिल गर्न सफल भयो।
ग्लोरिया Macapagal-Arroyo, फिलिपिन्स
कार्लोस एल्भेजेज / गेट छविहरू
ग्लोरिया मकापागल-एर्रोयो (1947-उपस्थित) फिलीपींसका चौथो दशौं राष्ट्रपतिको रूपमा 2001 र 2010 को बीचमा सेवा गर्थे। उनी नौवें राष्ट्रपति डायोडोडो मकापागलको छोरी हुनुहुन्छ, जो 1961 देखि 1965 सम्मको कार्यालयमा थिए।
एर्रोयो राष्ट्रपति यूसुफ एस्ट्राडाको उपराष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गरिरहेका थिए, जसले 2001 मा भ्रष्टाचारको लागि इस्तीफा लिन बाध्य भएको थियो। त्यो राष्ट्रपति भए, एस्ट्राडा विरुद्ध एक विपक्षी उम्मेद्वारको रूपमा दौड्यो। दस वर्षको लागि राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गरिसकेपछि, ग्लोरिया मकापागल-एर्रोयो प्रतिनिधि सभामा एक सीट जित्यो। तर, उनी चुनावको धोखाधडीको आरोप लगाए र 2011 मा जेल गए। यस लेखको रूपमा, उनी जेल र प्रतिनिधि सभामा छन्, जहाँ उनी पाम्पिलको दोस्रो जिला प्रतिनिधित्व गर्छन्।
मेगावाट सुकरनोपुरी, इंडोनेशिया
मेगावाट सुकरनोपुत्री (1947-वर्तमान), इंडोनेशियाको पहिलो राष्ट्रपति सुकारोको सबैभन्दा ठूलो छोरी हो। मेगावाटले 1 999 देखि 2004 सम्म पुरािपेलोको अध्यक्षको रूपमा सेवा गरे। त्यस पछि देखि सुसेलो बाबाङ युधोओनो विरुद्ध दुईपटक चलाइएको छ तर दुवै पटक हराएको छ।
भारत प्रताप पटिल
भारत को राष्ट्रपति प्रताभ पाटिल। क्रिस जैक्सन / Getty छवियाँ
कानून र राजनीतिको लामो क्यारियर पछि, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका सदस्य प्रताभ पाटिलले 2007 मा भारतको राष्ट्रपतिको रूपमा पाँच वर्षको लागि कार्यालयमा भाग लिएका थिए। पाटिल लामो समयसम्म नै नेभ / गांधी राजवंशको सहयोगी भएका थिए (इंदिरा गांधी माथि उल्लेखित), तर आफै आफैले राजनीतिक आमाबाबुबाट तल आएनन्।
भारतको राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गर्ने प्रताप पाटिल पहिलो महिला हो। बीबीसीले आफ्नो चुनाव "एक देशमा महिलाहरु को लागि एक ऐतिहासिक स्थान छ जहाँ लाखौं हिंसा, भेदभाव र गरीबीको सामना गर्दछ।"
रोजा ओटोनबेवे, किर्गिस्तान
विकिपीडिया मार्फत अमेरिकी राज्य विभाग
रुजा ओटोनबेवे (1950-वर्तमान) ले 2010 मा प्रदर्शनकारीहरूले क्रिजजानको राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गरेका थिए, जसले कुर्मानबेक बाकियेव, ओटुबेबावले अन्तरिम राष्ट्रपतिको रूपमा काम गरे। बकिजीव आफुले 2005 को किर्गिजस्तानको टुलिपिप रिभोल्युशन पछि शक्ति पाएका थिए, जसले तानाशाही अस्कर अकयेवलाई पराजित गर्यो।
Roza ओटोबाइभे अप्रिल 2010 देखि डिसेम्बर 2010 सम्म अफिस कार्यालय थियो। एक 2010 रेफरलम्युमले देशमा राष्ट्रपतिको गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक तिर 2011 मा आफ्नो अन्तिम पदको अन्तमा परिवर्तन गर्यो
यिंग्लक शिनावात्रा, थाईल्याण्ड
पाउला ब्रोनस्टीन / Getty छवियाँ
यिंग्लक शिनावात्रा (1967-उपस्थित) थाईल्याण्डको पहिलो महिला प्रधान मंत्री थिए। उनको ठूलो भाइ थिकसिन शिनावात्राले सन् 1 997मा सैन्य कारावासमा समातेर सम्मसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गरे।
औपचारिक रूपमा, यिंग्लकले राजाको नाममा शासन गरे, भुम्बुल अडिजुदेज । पर्यवेक्षकहरूले शंका गर्थे कि उनले वास्तवमा तिनको बाह्य भाइको चासो देखाए। उनी शक्तिबाट निकालिँदा 2011 देखि 2014 सम्मको कार्यालयमा थिए।
पार्क गेयन हेई, दक्षिण कोरिया
पार्क जियो हेई, दक्षिण कोरियाको पहिलो महिला अध्यक्ष। चुंग सुङ्ग जुन / गेट इमेज
पार्क Geun हई (1952-उपस्थित) दक्षिण कोरिया को ग्यारहवें राष्ट्रपति हो, र पहिलो महिला को त्यो भूमिका को लागि निर्वाचित छ। उनले फेब्रुअरी 2013 मा पाँच वर्षको अवधिको लागि काम गरे।
राष्ट्रपति पार्क पार्क चंग हे की बेटी हो, जो 1960 र 1970 मा कोरिया को तेस्रो राष्ट्रपति र सैन्य तानाशाह थिए। 1974 मा उनको आमाको हत्या भएपछि पार्क ग्याना हेई सन् 1 995सम्म दक्षिण कोरियाको आधिकारिक पहिलो महिलाको रूपमा सेवा गरे - जब उनको बुबा पनि हत्या भयो।
आधुनिक ओलम्पिक को संस्थापक, पियरे डी कोबर्टिन
हेलेन ट्रॉयर आइलीड को होमर मा
ग्रीक ग्रीक गायक अर्यनको आश्चर्यजनक अजीब संसार
टुरुर वा तमिलले को संक्षिप्त जीवनी
के ग्रीक योद्धा Achilles बच्चाहरु थिए?
चीनको जिया राजवंशको सम्राटहरू
रूसी क्रांति भाग2को कारण
के एक लामो कडा भन्दा राम्रो संग क्यु क्यू छ?
5 टाइम्स संयुक्त राज्यले विदेशी चुनावमा हस्तक्षेप गर्यो
स्प्लिट अनन्तको बुझाइ
10 एल्समोसोरस को बारे मा तथ्य
विश्वासको बारेमा कविहरू
जीवविज्ञान उपसर्गहरू र सिकारहरू: ग्लियोको-ग्लूको-
सेसियम तथ्यहरू - परमाणु संख्या 55 वा सीएस
म्याथ्स उपनाम अर्थ र उत्पत्ति
पशुहरूको बारेमा हामी कसरी नसोचेको सहयोग गर्छौं
एनएनले म्याकक्लङ को थियो? उन्ले के गरिन?
ओस्टारा सबब को लागि व्यञ्जनहरु
मोरबिज सुख - अजीब कथाहरु मृत्यु को बारे मा
स्नातक विद्यालयका लागि नमूना सिफारिस पत्र
खाद्य आदेशका लागि वाक्यांशहरू
क्या डिज्नील्याण्ड बाट "माउस बूट" को लागि एक आमा र छोरी बन्नु भयो?
के यो स्पेसमा लाइभको जस्तै छ?
पैसाबाट साधारणतया स्वर्गबाट ​​फेल हुँदा दुर्लभ टाइम्सहरू सिक्नुहोस्
खतरनाक घरेलू रसायन
सात सेल्यियस बहनों को आकाश को शासन गर्दछ
परिचय मिश्रित विषयहरु मा अभ्यास
फ्रांसीसी प्रर्दशन 'डान्स' कसरी प्रयोग गर्ने
राम्रो प्रिन्सिपलको गुण
समाजशास्त्रमा विभिन्न प्रकारका नमूना डिजाइनहरू र तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने